UYesu Kristu—UMesiya Othenjisiweyo | Okufundiswa YiBhayibhile
UKUZE asincede sazi ukuba ngubani uMesiya, uYehova uThixo uye waphefumlela abaprofeti abaninzi beBhayibhile ukuze banikele iinkcukacha ngokuzalwa kwalo Mhlanguli, nangobulungiseleli bakhe, kwanokufa kwakhe. Zonke ezi ziprofeto zeBhayibhile zazaliseka kuYesu Kristu. Iyamangalisa into yokuba ziye zazaliseka ngokweenkcukacha zazo zonke. Ukuzekelisa oku, makhe sihlolisise iziprofeto ezimbalwa ezachaza kwangaphambili iziganeko eziphathelele ukuzalwa kukaMesiya nokukhula kwakhe.
Umprofeti uIsaya wachaza kwangaphambili ukuba uMesiya wayeza kuphuma kumnombo kaKumkani uDavide. (Isaya 9:7) Eneneni uYesu wazalwa kumnombo kaDavide.—Mateyu 1:1, 6-17.
Omnye umprofeti kaThixo onguMika, waxela kwangaphambili ukuba lo mntwana wayeza kuthi kamva abe ngumlawuli yaye wayeza kuzalelwa ‘eBhetelehem Efrata.’ (Mika 5:2) Ngexesha lokuzalwa kukaYesu, kwakukho iidolophu ezimbini kwaSirayeli ezazibizwa ngokuba yiBhetelehem. Enye yayikufuphi neNazarete kumantla elo lizwe, enye ikufuphi neYerusalem kwaYuda. IBhetelehem eyayikufuphi neYerusalem yayikade ibizwa ngokuba yiEfrata. UYesu wazalelwa kuloo dolophu, kanye njengokuba isiprofeto sasichazile!—Mateyu 2:1.
Esinye isiprofeto seBhayibhile sachaza kwangaphambili ukuba uNyana kaThixo wayeza ‘kubizwa ukuba aphume eYiputa.’ Ngoxa wayesengumntwana, uYesu wasiwa eYiputa. Wabuyiswa emva kokufa kukaHerode, ngaloo ndlela kwazaliseka isiprofeto.—Hoseya 11:1; Mateyu 2:15.
Kuluhlu olukwiphepha 200, izibhalo ezidweliswe ngaphantsi komxholo othi “Isiprofeto” zineenkcukacha eziphathelele uMesiya. Nceda uzithelekise kunye nezibhalo ezidweliswe ngaphantsi komxholo othi “Ukuzaliseka Kwaso.” Oko kuya kukwenza ukuba ulithembe ngakumbi iLizwi likaThixo.
Ngoxa uhlolisisa ezi zibhalo, khumbula ukuba ezo zesiprofeto zabhalwa kumakhulukhulu eminyaka ngaphambi kokuzalwa kukaYesu. UYesu wathi: “Zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses nakubaProfeti nakwiiNdumiso zimelwe kukuzaliseka.” (Luka 24:44) Njengokuba nawe unokuzihlolela kwiBhayibhile yakho, ngokwenene zazaliseka—ngokweenkcukacha zazo zonke!
IZIPROFETO EZIPHATHELELE UMESIYA
Wazalwa kwisizwe sakwaYuda
Wazalwa yintombi enyulu
Wavela kumnombo kaKumkani uDavide
UYehova wathi nguNyana wakhe
Abazange bakholwe kuye
Wangena eYerusalem ekhwele iesile
Wangcatshwa ngumhlobo wakhe
Wangcatshwa ngamaqhosha esilivere angama-30
Kwenziwa amaqashiso ngezambatho zakhe
Bamtshabhisa ngoxa wayesesibondeni
INdumiso 22:7, 8
Akukho nalinye ithambo lakhe elaphulwayo
Yohane 9:33, 36
Wangcwatywa kunye nezityebi
Wavuswa ngaphambi kokuba umzimba wonakale
Waphakanyiselwa ngasekunene kukaThixo